“Waa nasiib darro, in ninkii walaalkaa ahaa Daawo ama Raashin dhacday oo uu garanayo kaa iibinayo, taasi waa walaalkaa oo xabaasha kuu jiidaya” | Saxil News Network
“Waa nasiib darro, in ninkii walaalkaa ahaa Daawo ama Raashin dhacday oo uu garanayo kaa iibinayo, taasi waa walaalkaa oo xabaasha kuu jiidaya”
“Waxyaabaha naftaydu ka caagan tahay waxaa mid ah in aan siyaasadda ka hadlo, ku odhan maayo waxyaabahaas ayay ku kala wanaagsanaayeen xukuumadihii kala danbeeyay ee dalka soo maray”…. Rashiid sulub Caalin
Hargaysa (.): Xarunta KAABBA Micro-finance institution oo ka shaqaysa arrimaha Samo-falka iyo taageeridda bulshadda jilicsan, waxay hawlahaasi ka shaqaynaysay muddo ku siman rubuc qarni. Taasi oo fadhigeedu yahay magaaladda Hargaysa, isla markaana kaalin weyn ka qaadatadda horumarinta iyo caawinta dadka jilicsan.
Sidaasina waxa uu ku sheegay wareysi uu siiyey war sidaha dhaymoolenews.com,waraysigaasina waxa u dhacay sidan.
Rashiid sulub Caalin waa madaxa xaruntaasi KAABBA Micro-finance institution, wuxuu ka waramay hay’adda Kaabba iyo hawlaha ay qabato. Waxaanu yidhi “KAABBA Micro-finance institution oo ah meel dadka danyarta ah lacagta lagu amaahiyo, lana mariyo nidaamka islaamka ee loo yaqaanno Muraabaxa. Lacagtaasi oo inta wax loogu iibiyo ay hadhow bil walba ay lacag cayiman soo bixiyaan. Dad badan ayay gaadhay hawshaasi oo ka faa’iidaystay intii aanay bangiyadu iman dalka ama aan la abuurin, ilaa labaatan sanno ayaanu hawshaasi soo wadnay. Ilaa 25-kun oo qof ayaa ka faa’iidaystay barnaamijkaasi, oo wax ka qabsaday.”
Waxa kale oo uu sheegay Rashiid Sulub in hawshiisa ugu badan ee uu ka shaqeeyaa ay tahay arrimaha dhinaca Samo-falka, taageeridda iyo caawinta dadka jilicsan iyo sidoo goobaha arrimaha bulshadda sida cusbitaaladda, Jeelasha, iyo meelaha kale ee ay dadka dhibaataysani ku jiraan.
Rashiid, oo aanu weydiinay cidda ka taageerta ama gacan ka siisa dhaqaalaha uu ku bixiyo goobaha dadka Samo-falka. Waxaanu ku jawaabay “Hawlo badan oo Samo-fal ah ayaan ka shaqeeyaa, oo uu ka mid yahay barnaamijka la yidhaahdo Geediga-wadaay. Oo marba meesha aan is-leeyahay way liidataa, haddii ay tahay taakulaynta dadka dhiban, ee ugu liiadata, cusbitaaladda, curyaamiinta, iyo Jeelasha ayaan caawinayay mudadda rubuc qarniga ah ee aan dalka joogay. Dhaqaalaha cidna kama soo qaaddo, cidii dadka Soomaalidda ah ka mid ah ee wanaagaasi wax ku darsanaysana waan ka qaadaa”.
Aqoon yahan Rashiid Sulub Caalin, ayaa barnaamijyadda sida weyn loogu xasuusto ee la xidhiidha arrimaha bulshadda ee uu isagu curiyay ama kaalinta wax ku oolka ah ka qaatay waxaa ka mid ahaa barnaamijkii la magic baxay “qiimee qofkaaga wanaagsan”, kaasi oo Somaliland laga qabtay badhtamihii sanadkii 2014-kii.
Md. Sulub, mar wax laga waydiiyay maadaama oo ay hay’adiisu muddo dheer dalka ka shaqaynaysay sida ay ugu kala dhego-nuglaayeen xukuumadihii kala danbeeyay ee dalka soo maray, gaar ahaana xukuumadda hadda talladda haysa, ayaa su’aashaasi kaga gaabsaday in aanu wax faaqidaad ah ka bixinaynin kala duwanaanshaha dawladihii soo maray talladda dalka Somaliland, wuxuuna sheegay in arrimaha siyaasadu aanu wax lug ah ku lahayn, isla markaana ay mid tahay waxyaabaha isaga shaqsiyan ka reeban in uu ka hadlo.
“Waxyaabaha naftaydu ka caagan tahay waxaa mid ah in aan siyaasadda ka hadlo, siyaasaduna marka laga reebo in wax la isku sheego, oo dadka madaxda ah la baraarujiyo, taasi iyadu siyaasad ma noqonayso. Laakiin anigu ku odhan maayo waxyaabahaas ayay ku kala wanaagsanaayeen xukuumadihii kala danbeeyay ee dalka soo maray. Hase yeeshee kelmadda ku jirtaa waxay tahay, xukuumadihii hore ee tegay, ta hadda joogta iyo kuwa danbe ee soo socda dhibaatooyin waa weyn iyo qadiyaddo waa weyn, oo Gondaheenna yaalla, oo aynu inagu gacmaheenna ku kasbanay iyo kuwo aduunku inala wadaago, intuba way joogaan.
Dawladuna dadka ayuunbay ka mid tahay, oo anigga iyo adiga ayuunbay ka timaadaa. Markaa waxa loo baahan yahay in aynu shaqayno, oo aynu dedaalno, oo wixii aynu xalin karno aynu xalino ayaa loo baahan yahay, waanna tii aan ku lahaa Geediga hore u wadaay, oo waa in aynu hore u socono. Madaxdeena, masuuliyiinteenna iyo ganacsatadeenna iyo iangoo danteenna guud ee la xooray, ee nin waliba uu dantiisa u cararayo in ILLAAHAY inagu soo hadeeyo, oo aynu dib ugu soo noqono oo aynu is-jeclaanno, oo aynu is-wadanno, ayaan ILLAAHAY inooga rejaynayaa” ayuu yidhi Rashiid sulub.
Waxa kale oo uu ka hadlay waxyaabo uu sheegay in ay bulshadeena dhibaato weyn ku hayaan, kuwaasi oo ay ka mid yihiin Tahriibka dhalinyaradda, taasi oo uu sheegay in aanay dadkeenu wax qorshe ah ka lahayn sidii dhibaatadaasi wax looga qaban lahaa.
Isagoo arrimahaasi ka hadlayayna waxa uu yidhi “Imika dhibaatooyinka ugu badan ee bulshadeena haysta waxaa ka mid ah, Tahriibta ay dhalinyaradeenii badaha iyo saxaraha ku Lee’anayaan. Ubadkiina waalidiintii gacanta uguma jiraan, oo arki maysid cid qudha oo odhanaysa aan isku tagno oo aynu wax ka qabano dhibaatadda Tahriibka aynu wax ka qabano. Waa la iska qayilayaa uun, oo waa la iska fadhiyaan, waad garan karaysaa Soomaali dhaqankeedda”.
Dhinaca kale Rashiid Sulub Caalin, ayaa nasiib darro ku tilmaamay in ganacsatadda dalku ay badeecaddo dhacay ka iibiyaan bulshadeenna, gaar ahaana Daawooyinka.
“Waa nasiib darro, in ninkii hooyo iyo aabo idin wadda dhaleen ee walaalkaa ahaa, ayaa Daawo dhacday oo uu garanayo kaa iibinaya. Markaa taasi waa walaalkaa oo kuu jiidaya Xabaasha, wax la qaadan karro ma aha. Waxaa loo baahan yahay in aynu dawladeenna ku baraarujino, oo aynaan waxba kala hadhin, in ay arrintaasi wax ka qabato. Waana in qof kasta oo Faramsiiyadda ku arka daawo dhacday in ay saldhigyadda booliska tagaan, si wax loogga qabto. Markaa waxa loo baahan yahay in aynu wax ka qabano ganacsatadaasi daawooyinka iyo raashinka dhacay dadka u keenaya, oo aynu Xanuujino ayaa la inoogga baahan yahay. Meel kasta oo aduunka la joogaba, way jiraan dad sidan oo kale qalbiga uga bukka, oo si walba oo ay lacag u samayn karaanba ku samaynaya” ayuu yidhi aqoon yahan Rashiid sulub.
Gebagebadii Rashiid Sulub, waxa uu ka hadlay waxyaabaha u qorshaysan ee uu doonayo in uu qabto in ay ka ugu muhiimsan tahay sidii uu u sii wadi lahaa caawinta iyo taageeridda dadka jilicsan, taasi oo uu sheegay in aanu marnaba ka daali doonin.
Waxaanu bulshadda reer Somaliland u soo jeediyay in ay qo waliba uu isku xil-qaamo sidii uu uga shaqayn lahaa waxyaabaha danta guud ah, sida in wax la tabcaddo oo laga faa’iidaysto biyaha roobka ee Badaha iskaga shubma.